Dib u eegida Insta360 Pro: waxaan tijaabinay kamarad 360-degree ah oo duubaysa 8K | War gadget
Nacho Cuesta | | Sawir, Kaamirada
Suuqa kaamirada darajada 360 ayaa si tartiib tartiib ah caan uga dhex ah isticmaalayaasha, si kastaba ha noqotee, qaybta xirfadaha xulashooyinku aad bay u xadidan yihiin moodooyinka la kala dooranayaa way yar yihiin. Kaamirada Insta360 Pro waa mid ka mid ah tixraacyada suuqa hadda jira, oo dhalaalaya 6 lenses-nabadeed oo awood u leh inay duubaan sawirada qaraarka 8K.
Haddii aad rabto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kamaraddan VR, waxaan kuu sheegi doonnaa dhammaan astaamaheeda hoos ku xusan:
2 Insta360 Pro Tilmaamaha
3 Aragtida koowaad
4 Insta360 Pro Tayada Sawirka
6 LOOGU TALAGALAY
Sanduuqii sanduuqa 'Insta360 Pro' ayaa kadis ah. Khaanada kartoonka waxaa lagu badalay a kiis caag ah oo aad u adkaysta oo leh laba quful nabadgelyo oo ka hortagaya furitaanka shilalka oo khatar gelin kara sharafta qalabka (kaas oo lagu qiimeeyo ku dhowaad 4.000 euro, halkan waad ka iibsan kartaa).
Hadda oo aad ogtahay waxa ku kacaya kamaradan 360, kaama yaabin doono haba yaraatee inay timaado si loo ilaaliyo. Waxay muhiim u tahay sheyga ku socon doona dhaqdhaqaaq joogto ah.
Marka shandada la furo waanu qadarinaynaa taas ilaalinta dibada ayaa sidoo kale loo wareejiyaa gudaha oo leh lakab weyn oo xumbo tayo sare leh. Kiiska balaastigga ah wuxuu helaa dharbaaxo iyo xumbo ayaa dhuuqi doonta xoogga iyo gariirka si Insta360 Pro aysan wax dhibaato ah u geysan.
Marka laga reebo tan kore, shandadda waxaan helnaa qalabka soo socda:
12V iyo xeedho 5A
Cajalad caag ah si muraayadaha indhaha looga ilaaliyo kuuskuusyada iyo boodhka
Batariga 5100 Mah si loo siiyo qiyaastii 70 daqiiqo oo ismaamul ah
USB si adabtarada Ethernet
Cintra si ay ugu qaaddo kamaradda garabka si raaxo leh
Dukumiinti iyo warqad mahadnaq ah oo ka timid shirkadda
In kasta oo qalab aad u tiro yar lagu daray, Si aad u awoodo inaad bilowdo adeegsiga kamaradda, waxaad u baahan doontaa kaarka xusuusta ee SD Extreme PRO V30, V60 ama V90 si loo taageero heerarka wareejinta ee looga baahan yahay in lagu duubo fiidiyowga 8K. Waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaarka isku xirka SSD-ka adag adoo adeegsanaya isku xirka USB 3.0. Sidaad u aragto, ma isticmaali karno wax xusuus ah maadaama dalabaadka ay badan yihiin.
Insta360 Pro Tilmaamaha
Si aad wax yar uga ogaato Insta360 Pro, hoosta waxaad ka leedahay soo koobista astaamaha ugu waaweyn:
6 lenses fisheye
Noocyada DNG Raw ama JPG
7680 x 3840 oo ku yaal 30fps (2D 360)
3840 x 1920 oo ku yaal 120fps (2D 360)
6400 x 6400 ama 30fps (3D 360)
3840 x 3840 ama 60fps (3D 360)
Go'aan si toos ah loogu tabinayo
3840 x 1920 oo ku yaal 30fps (2D 360)
3840 x 3840 oo ku yaal 24fps (3D 360)
La jaan qaada YouTube, Facebook, Periscope, Twitter, Weibo
Taageerida maqalka goobta
Laga bilaabo 1/8000 ilaa 60 sekan
100 6400 a
6-xasilinta gyroscope xasilinta
U istaag safarada
1 / 4-20 dun
SSD drive adag ka badan USB 3.0
HDMI 2.0 Nooca-D
5100 mAh batari
Madax-bannaanida 75 daqiiqo
Kaamirada waa la isticmaali karaa inta lacag la dalacayo
Awoodda Insta360 Pro waxay na siineysaa tilmaan wanaagsan taas waxaan wajaheynaa koox qaali ah, Tuhunno la xaqiijiyey markii ugu horreysay ee aan shidno qalabka iyo taageere uu bilaabo inuu wareego si kor loogu qaado qaboojinta, wax aluminiumku uu sidoo kale daryeelo.
Wadarta guud lix muraayadaha waaweyn ee kalluumeysiga ayaa dhinac dhinac naga eegaya joogto ah. Waxay leeyihiin furitaan f / 2.4 sidaa darteed way dhalaalayaan si ay u helaan natiijooyin wanaagsan xitaa jawiga iftiinka yar. Haddii wakhti kasta oo kamaraddu ay dhibaato ku jirto, waxaan haysannaa ISO oo si otomaatig ah loo hagaajiyo laakiin aan sidoo kale gacanta ku hagaajin karno qiimayaasha u dhexeeya 100 illaa 6400, in kasta oo qiimayaasha sarsare ay yihiin aragtida dhawaqa sawirka cajiib ah oo fiiqan lumay.
Kaamiradu si iskeed ah ayey u shaqeysaa. Waxaan kaliya u baahanahay inaan heysano kaarka xusuusta ee Extreme PRO V30 SD (haddii ay tahay V90, ka fiican) ama USB 3.0 SSD disk adag oo batteriga lagu soo oogay. Taas waxaan haysanaa ilaa 75 daqiiqo oo ismaamul ah si aan u duubno fiidiyow ama aan ku qaadno sawirro qaraarro gaaraya illaa 8K.
Hawlgalka aasaasiga ah ee kamaradda waxaa laga samayn karaa shaashadda yar iyo badhamada xagga hore. Waa wax aad u fudud oo dareen leh in la maareeyo maaddaama aan haysanno kaliya badhanno aan uga gudubno menusyada, badhan aan aqbalno iyo mid kale oo aan dib ugu laabanno. Dabcan, shidashada waxay qaadataa waqti (qiyaastii 90 ilbidhiqsi) markaa waa inaad xisaabta ku darsataa kahor intaadan qaadan sawirka ama fiidiyaha.
Xulasho ahaan waxaan ka faa'iideysan karnaa isku xirnaanta ballaaran ee uu Insta360 Pro na siinayo si loogu xiro qalabyada dibada sida makarafoon (sida caadiga ah waxaan haysanaa 4 makarafoon oo la jaan qaadi kara codka maqalka, in kasta oo waxqabadkoodu uu yahay mid aad u cadaalad ah) ama muuqaal HDMI ah si loo soo bandhigo sawirka ay kamaradu qabatay.
Waxaan sidoo kale ka faa'iideysan karnaa isku xirnaanta RJ45 si aan ugu raaxeysanno xawaare ballaadhan oo aad u sarreeya adoo adeegsanaya fiilo Ethernet ah, in kastoo haddii aan aad u jeclaanno xulashada wireless-ka, Insta360 Pro Waxay ku timid qalabaysan WiFi si aan ugu xirno laptop-ka ama taleefanka casriga ah oo aad u adeegsan kartaa sida muraajiceeye, mashiinka durugsan, sameynta sawirrada, toos uga xiriir shabakadaha bulshada, iwm.
Sida aad arki karto, waxaa jira fursado badan oo kala duwan oo la heli karo markay tahay isku xirnaanta.
Insta360 Pro Tayada Sawirka
Tayada sawirka waa xoogga ugu weyn ee qalabka. Kaliya kuma raaxeysan karno qaraarada 8K laakiin muuqaalka muuqaalku wuxuu sifiican uga sareeyaa sida caadiga ah, wax si gaar ah muhiim ugu ah kuwa doonaya inay sawirada ku qabtaan 3D ama xaqiiqda dhabta ah, wax sii kordhaya mahadnaqa muraayadaha sida Oculus iyo in adduunka suuq-geynta ama madadaalada ayaa doonaya inay ka faa'iideystaan ​​si ay u siiyaan khibrado cusub dadka isticmaala.
Daaweynta iyo midowga dhammaan sawirada ay qabteen mid kasta oo ka mid ah muraayadaha indhaha waa mid aad waxtar u leh taasina waxay siineysaa fiidiyowga natiijo dhab ah oo aad u badan oo daawadayaasha ah.
Hadaan isticmaalno kaamerada fiiqnaanta si muuqata ayaa loogu hagaajiyay sawir qaadista ku saabsan fiidiyowga. Hoos waxaad ka arki kartaa tusaale sawir qaad ah oo lala qaaday Insta360 Pro oo la muujiyay ka dibna isla sawir isku mid ah oo leh saamaynta "meeraha yar" ayaa la adeegsaday.
Sawir fidsaneeg cabirka asalka ah)
Runtii way adagtahay in ereyo lagu sharaxo qayb bixinaysa fursado badan, hal abuur iyo farsamo labadaba. Waxa cad waa taas qalabka ayaa la socda oo leh Insta360 Pro waxaan ku guuleysan karnaa natiijooyin aad u wanaagsan iyada oo aan daruuri ahayn in loo isticmaalo xirfad yaqaan. Sawir qaadista iyo dadka xiiseeya fiidiyowga ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara kamaraddan 360, in kasta oo ay tahay inay si cad u caddeeyaan kharashka ku baxa iibsiga qalabka heerkan (oo ah wax aan horeyba ugu soo qaadannay kamaradaha SLR sida Canon 5D Mark).
Waana software-ka eedda leh Insta360 Pro oo loogu talagalay dhammaan dhagaystayaasha. Waxaan haynaa barnaamijyada tafatirka xirfada leh ee aan wada ognahay laakiin soo saaruhu wuxuu na siiyaa noocyo kala duwan oo badan oo codsiyo ah aad ufudud in loo isticmaalo, waxkastoo aqoonteena ah:
Qalabka xakamaynta kamaradda: sida magaceedaba ka muuqata, waa barnaamij lagu awoodo inuu ka hawlgalo barnaamijka '' Insta360 Pro 'mobilkaaga, kiniinkeena ama kumbuyuutarkayaga.
Insta360 Pro Stitcher: waa barnaamij caawiya in laga takhaluso khaladaadka suurtagalka ah ee ku jira midowga sawirada ay qabatay kamaraddu, waana wax ku badan moodeellada aasaasiga u ah shirkadda. Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee qalabka 'Insta 360 Pro' ee la helay ayaa si weyn u wanaajisay dhinacan.
Ciyaaryahan Insta360: waa ciyaariyahan sawirada iyo muuqaalada la duubay. Waxaan si fudud u soo jiidaneynaa feylka ay soo saartay kamaradu si toos ah ayaan ugu raaxeysan karnaa qaabka darajada 360.
Insta360 Studio: haddii aan dooneyno inaan u dhoofinno ama aan wax ka bedelno iftiinka sawirrada ama fiidiyowyada, barnaamijkan ayaa kuu oggolaanaya inaad sidaa sameysid.
Kuwani waa barnaamijyada ugu waaweyn ee soo saaruhu na siiyo laakiin sidaan idhi, waxaan u adeegsan karnaa barnaamij kasta oo tafatir ah muuqaal iyo muuqaal.
Insta360 Pro Waa koox aad u dhameystiran kuna jihaysan waax gaar ah dadka. Kordhinta xaqiiqda dhabta ah ee la kordhiyay iyo kuwa la taaban karo ayaa sababaya qeybaha sida suuq geynta inay dib ula soo noqdaan iyaga oo u soo bandhigaya dadka isticmaala habab cusub oo ay kula falgalaan badeecadaha waana meesha ay kamaradani ka ciyaari karto door kala duwanaanshaha ganacsiga maxalliga ah.
Dhis tayo iyo dhammee
Fursadaha xirfad iyo hal abuur leh
Is-maamul hoose. Way kafiicantahay inaad heysato dhowr baytariyada dayactirka ah ama aad lashaqeyso kamarada kuxiran shabakada.
Haddii aadan xirfadle ahayn oo aad si fudud u jeceshahay adduunka sawir iyo muuqaal, Insta360 Pro waa wehel safar fiican. Waxaan had iyo jeer haysanaa xusuusta lagu duubay cajalad fiidiyow ama sawir ah oo 360-degree ah oo kombiyuutarkeenna ku jirta oo tayo sare leh, inkasta oo ay ka fog tahay natiijooyinka aan ku helno wax kamarad ah SLR ama APS-C ah. Xaaladdan oo kale, waa inaan go'aan ka gaadhno haddii aan ka doorbidno waxyaabaha ku jira is-dhexgalka wixii ku saabsan waxyaabaha soo jireenka ah, in kastoo aan sii haysan karno waxa ugu fiican labada adduun.
Ku dhufo? 3.950 euro oo ah inaad bixin doonto si aad u hesho.
Dib u eegida: Nacho Cuesta
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Kaamirada » Dib u eegida Insta360 Pro
LG Q7 wuxuu imaan doonaa Spain bisha Juun isagoo ku qaadan doona 349 euro